ROSA Image Onye edemede: Onye njikwa dị mfe maka ihe oyiyi ISO na-ere ọkụ na USB | Site na Linux
Na eluigwe na ala nke Ngwa GNU / Linux enwere otutu nhọrọ, n'ihe banyere ngwa oru ma obu Ndị njikwa maka ọkụ faịlụ onyonyo ISO na draịva USB. Taa, ọ bụ oge obere oku a maara Rosa Image Onye edemede.
Rosa Image Onye edemede bụ obere ngwa na-adọta anya nke otu ma ọ bụ nzukọ Russia akpọrọ ma kesaa Mmmmmmmmmmmm, onye nwekwara nke ya GNU / Linux Distro oku Desktọpụ ROSA. Nke bụ ya mere, ọ na-kpọmkwem iji na-, na mgbakwunye na, nanị na ozugbo idekọ iche iche Faịlụ ISO na a USB mbanye, mee ya nke ọma na faịlụ ISO nke kwuru Russian Distro.
O kwesiri ekwesi, maka ndi na amaghi ihe banyere ha GNU / Linux Distro Asụsụ Russia Desktọpụ ROSA na ọ bụ nkesa maka ndị nwere mmasị na ụwa GNU / Linux na nke ugbu a na-aga maka ụdị ahụ ROSA Desktọpụ Ọhụrụ R10. Version mụrụ dị ka nke abụọ ntọhapụ dabere na pink n'elu ikpo okwu, nke n'aka nke ya nwere afọ 2 nke nkwado ọkọlọtọ na afọ 2 nke nkwado gbatịrị agbatị, na onye a ga-enye mmelite nche ya ruo na njedebe nke 2020, dị ka ndị mmepe ya si kwuo.
Maka ugbu a, ROSA Desktọpụ Ọhụrụ R10 O nwere ebe desktọọpụ desktọọpụ abụọ (Plasma 5, KDE 4) na desktọọpụ desktọọpụ abụọ kwekọrọ na nkwado obodo (LXQt, Gnome 3). N'ikpeazụ, maka ozi ndị ọzọ gbasara nke a GNU / Linux Distro Nwere ike ịga na njikọ njikọ ya na ihe ndị a njikọ site na wiki ya, ma obu nke a sitere na ulo oru mmepe Linux Linux a na akpo Ụlọ ọrụ NTC IT ROSA.
1 ROSA Onye edemede edemede
1.2 Kedu ka o si arụ ọrụ?
1.3 O kwesịrị maka nkesa ndị ọzọ?
ROSA Onye edemede edemede
Maka ngwa anyị n'okpuru ọmụmụ ihe a, nke ahụ bụ, ROSA Onye edemede edemede ma dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, otu ihe:
Ọ na-abịa tupu-arụnyere na ọhụrụ dị version nke ROSA Desktọpụ Ọhụrụ R10
Enwere ike itinye ya na ndị ọzọ GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ, na mgbakwunye na Windows na Mac OS X, na-eji faịlụ ọnụọgụ abụọ (executables) na nha ndị a:
Enwere ike ịnweta koodu ntinye ya, na ihe ndị a Ebe nchekwa ABF.
Dị ka MX-Linux Distro na ngwa ya (nke ya) "MX Mee Live-USB" (MX Live USB Maker) a ga-edekọ ya nke ọma na a USB mbanye, na Distro ROSA Desktọpụ Ọ chọrọ ngwa pụrụ iche maka nzube a, ebe ọ nwere ngwakọ ngwakọ.
Nke pụtara na, Desktọpụ ROSA nwere nkụnye eji isi mee nke Ihe oyiyi ISO, yana tebụl nkebi nwere ihe ndekọ buut eji maka draịva ike na draịva ọkụ. N'ụzọ dị otú a, na ihe kachasị nke ngwa chọrọ naanị ịde ya na bitwise flash disk faịlụ ISO na enweghi nsogbu. Dị nnọọ ka, ọ bụrụ na ọ bụla GNU / Linux Distro ọkọlọtọ akara akara iwu akpọrọ "Dd". Ọ bụ ezie na, iji ngwá ọrụ a chọrọ ụfọdụ nkà na ọtụtụ ịkpachara anya iji zere overwriting na-ezighị ezi disk.
O kwesịrị maka nkesa ndị ọzọ?
Mmepe nke ngwá ọrụ na-ekwupụta na nke a ga-adabere na GNU / Linux Distro họọrọ onye ọrụ. Ma ha amachi, na ọ bụrụ na kwuru faịlụ nke Ihe oyiyi ISO nke ụfọdụ GNU / Linux Distros nwere ike dee na a flash disk (USB mbanye) na-eji iwu "dd" ma ọ bụ ngwa ọzọ yiri ya nke na - eme ụdị bitwise, yabụ ee, ROSA Onye edemede edemede enwere ike iji ya mee otu ihe ahụ.
Ọ bụrụ na, na Kama nke ahụ, kwuru faịlụ nke Ihe oyiyi ISO chọrọ ihe ndị ọzọ dị elu, na nkebi ahụ flash disk, ịkpụzi ya, detuo data dị ka set nke faịlụ, n'etiti usoro ndị ọzọ pụrụ iche, yabụ mba ROSA Onye edemede edemede ọ gaghị enye aka.
Iji chọọ ngwá ọrụ ndị ọzọ bara uru na mpaghara a, anyị na-akwado ịgụ ọkwa anyị na-esote na isiokwu:
Ndị njikwa maka ịdekọ ihe oyiyi diski na ngwaọrụ USB
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere nke a flashy obere ngwa a na-akpọ «ROSA Image Writer», nke na-enye anyị ohere ịme ndekọ dị iche iche na ozugbo Faịlụ ISO na a USB mbanye, ọkachasị ndị nke nwere Russian GNU / Linux Distro oku «ROSA Desktop», nke bu onye okike nke kwuru ngwa; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » ROSA Image Onye edemede: Onye njikwa dị mfe maka ihe oyiyi ISO na-ere ọkụ na USB
Apple na Google Team Up na Mwepụta Mkpakọrịta COVID-19 Ndepụta Ngwaọrụ Nke a Ga-abụ Ọgwụgwụ Nzuzo?